Bit By Bit - Running fanandramana - 4.6 Advice
Na manao zavatra manokana ianao na miara-miasa amin'ny mpiara-miasa, te hanolotra torohevitra efatra izay hitako fa tena nanampy ahy tamin'ny asako manokana. Ny toro-hevitra roa voalohany dia ampiharina amin'ny fanandramana rehetra, raha ny faharoa kosa dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fanandramana dizitaly.
Ny torohevitra voaloko momba ny fotoana anaovanao fanandramana dia ny tokony hieritreretanao betsaka araka izay azo atao alohan'ny angon-drakitra. Toa miharihary ho an'ireo mpikaroka mahazatra ny mihazakazaka fanandramana izany, saingy tena zava-dehibe ho an'ireo izay efa zatra miasa amin'ny loharanom-baovao lehibe (jereo ny toko 2). Amin'ny loharanom-baovao toy izany, ny ankamaroan'ny asa dia atao aorian'ny fanananao ny angona, fa ny fanandramana no mifanohitra amin'izany: tokony atao ny ankamaroan'ny asa alohan'ny hanangonanao angona. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahafahanao mihevi-tena tsara alohan'ny hanangonanao tahirin-kevitra dia ny mamolavola sy manoritra drafitra mialoha ny fanadihadiana momba ny fanandramanao izay amaranao ny fanadihadiana izay hitondranao azy (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011; Lin and Green 2016) .
Ny teboka faharoa amin'ny toro-hevitra ankapobeny dia tsy hisy fanandramana tokana ho tonga lafatra, ary, noho izany, tokony handinika ny famolavolana andiana fanandramana izay mifampiahy. Nandre izany aho, araka ny tetikady armada ; Raha tokony hanandrana hanangana fiarabe goavana iray ianao dia tokony hanamboatra sambo kely kokoa miaraka amin'ny hery fanampiny. Ireo karazana fanandramana marobe ireo dia efa mahazatra ao amin'ny psikolojia, saingy tsy dia fahita firy izy ireo. Soa ihany fa mora kokoa ny fandinihina ny vidin'ny fanandramana nomerika sasany.
Noho ny antony fototra ankapobeny, te-hanolotra toro-hevitra roa aho izay manokana manokana amin'ny fanandramana traikefa momba ny dizitaly: mamorona angon-drakitra miovaova (ny fizarana 4.6.1) ary manangana ny etika eo amin'ny endrika (fizarana 4.6.2).